DIRECTX ကိုငါ INSTALLED ဗားရှင်းဆုံးဖြတ်ရန်ဘူးဘယ်လို 9.0C, 10, 11, DIRECTX ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ဘယ်လိုနေသလဲ? - ဂိမ်းပြဿနာများ - 2019
ဖြစ်ကောင်းလူအတော်များများ, အထူးသဖြင့်ဂိမ်းကစား, DirectX ကိုအတိုင်းဤလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်အစီအစဉ်ကိုအကြောင်းကိုကြား၏။ စကားမစပ်ကြောင့်မကြာခဏဂိမ်းနှင့်အတူကို bundle လာဂိမ်းသူ့ဟာသူ၏ installation ပြီးနောက်, DirectX ကို၏ဗားရှင်း update လုပ်ဖို့အဆိုပြုထားပါသည်။
ဤဆောင်းပါး၌ငါ DirectX ကိုနှင့် ပတ်သက်. အများဆုံးမကြာခဏမေးလေ့မေးမေးခွန်းတွေအပေါ်အသေးစိတ်ရှင်းပြဖို့လိုပါတယ်။
1. DirectX ကို - ကဘာလဲ, ဘာကွောငျ့လဲ?
2. DirectX ကိုဘယ်ဗားရှင်းကသင်၏ system ပေါ်တွင် install လုပ်ပြီး?
DirectX ကိုဒေါင်းလုဒ်များနှင့်မွမ်းမံမှုများ၏ 3. ဗားရှင်း
DirectX ကို (ဖယ်ရှားရန်အစီအစဉ်ကို) ဖယ်ရှားပစ်ရန်မည်သို့ 4.
DirectX ကို - က Microsoft Windows နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဖြစ်ကြောင်းအင်္ဂါရပ်များတဲ့အကြီးအထားဖြစ်ပါတယ်။ အများစုကတော့အဲဒီအင်္ဂါရပ်တွေဂိမ်းအမျိုးမျိုးတို့ကို၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အသုံးပြုကြသည်။
ထို့ကြောင့်ဂိမ်း DirectX ကိုတစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ်ဗားရှင်း, ထို့နောက်အတူတူဗားရှင်း (သို့မဟုတ်မြင့်မားသော) အရဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခဲ့တာပါလျှင် run တံ့သောပေါ်တွင်ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ install လုပ်ထားရမည်ဖြစ်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်, ဂိမ်း developer များအစဉ်အမြဲ, ဂိမ်းနှင့်အတူအထုပ်ထဲမှာ DirectX ကို၏တပ်မက်လိုချင်သောအဗားရှင်းထည့်သွင်းထားပါသည်။ တခါတရံမှာသျောထပ်ရှိပါတယ်, နှင့် "ကို manual" တွင်အသုံးပြုသူအကောင့်ညာဘက်ဗားရှင်းကိုရှာဖွေခြင်းနှင့်ထည့်သွင်းပါ။
စည်းကမ်း, DirectX ကိုတစ်ဗားရှင်းသစ်အဖြစ်နှင့် (ဂိမ်း၏ဤဗားရှင်းနှင့်ဂရပ်ဖစ်ကဒ်ကိုထောကျပံ့ဖို့ဘာသာရပ်) * ပိုကောင်းအရည်အသွေးကိုရုပ်ပုံပေးပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ဂိမ်း DirectX ကို၏ဗားရှင်းကြိမ်မြောက်9အောက်မှာတီထွင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး, သင်ကသင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်မှာဆိုရင်လျှင်, 10th အပေါ် DirectX ကို၏ 9th ဗားရှင်းကို update - ခြားနားချက်ကိုမမွငျလိမျ့မညျ!
Windows အမှုစနစ်အတွက် built-in တစ်ခုအချို့ DirectX ၏ဗားရှင်းတစ်က default ရှိပါတယ်။ ဥပမာ:
- Windows XP ကို ​​SP2 - DirectX ကို 9.0c;
- Window7- DirectX 10 နဲ့
- Windows 8 ကို - DirectX ကို 11 ။
အတိအကျအဘယ်အရာကိုထွက်ရှာရန် ဗားရှင်း အဆိုပါစနစ်, စာနယ်ဇင်း "ဟုဦးဝင်း + R ကို" * (ခလုတ်က Windows 7, 8 အဘို့ခိုင်လုံသောရှိပါတယ်) များပေါ်တွင် install ။ ထို့နောက် (ထိုကိုးကားမပါဘဲ) "Run" type ကို "dxdiag" ရန်။
ဖွင့်လှစ်သောပြတင်းပေါက်၌, နိမ့်ဆုံးလိုင်းရှာဖွေပါ။ ကြှနျတေျာ့အမှု၌ DirectX ကို 11 ဖြစ်ပါတယ်။
ပိုပြီးတိကျတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေရှာဖွေ, သင် (ကွန်ပျူတာ၏ဝိသေသလက္ခဏာများကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ဖို့ဘယ်လို) သည်ကွန်ပျူတာ၏ဝိသေသလက္ခဏာများကိုဆုံးဖြတ်ရန်အထူးကိရိယာကိုသုံးနိုင်သည်။ ငါများသောအားဖြင့်အထက်ပါ link ကိုတခုတခုအပေါ်မှာဆောင်းပါးထဲမှာဧဝရက်သို့မဟုတ် Aida 64. ကိုအသုံးပြုဖို့ဥပမာ, သငျသညျအစအခြား utilities သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ဗီဒီယိုက - DirectX ကို 64 Aida ၏ဗားရှင်းထွက်ရှာရန်, ဖွင့် DirectX ကို / DirectX ကိုအပိုင်းကိုသွားပါ။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော။ Screenshot ကိုကြည့်ပါ။
DirectX ကို 11,0 ၏ဗားရှင်းစနစ်တပ်ဆင်ထားပါသည်။
များသောအားဖြင့်ဒီသို့မဟုတ်ရရှိခဲ့ကြောင်းဂိမ်းရန်, DirectX ကို၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းကိုထည့်သွင်းဖို့လုံလောက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အတွေးအခေါ်များသည်နှင့်အညီ, သင် DirectX ကို၏ 11 မှတစ်ဦးတည်းသာရည်ညွှန်းဆောင်ကြဉ်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့ဂိမ်းကို run ဖို့ငြင်းဆန်ပြီးတိကျတဲ့ဗားရှင်း၏ installation လိုအပ်သည်တစ်ခါတစ်ရံဖြစ်ပျက် ... ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သငျသညျစနစ်ကနေ DirectX ကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါ, ပြီးတော့ဂိမ်း * နှင့်အတူကို bundle ဗားရှင်းကိုထည့်သွင်းဖို့လိုအပ်ပါ (လမ်းကြောင်း၌။ ကြည့်ပါ။ ဤဆောင်းပါး၏အခန်း) ။
ကျနော်တို့ကဒီမှာ DirectX ကို၏လူကြိုက်အများဆုံးဗားရှင်းကိုတင်ပြ:
1) DirectX ကို 9.0c - Windows XP ကိုထောက်ခံကြောင်း, Microsoft web site ကိုမှဆာဗာ 2003 (Link ကို: ဒေါင်းလုပ်)
2) DirectX ကို 10.1 - DirectX ကို 9.0c အစိတ်အပိုင်းများပါဝင်သည်။ ဒီဗားရှင်း OS ကိုထောက်ခံပါတယ်: Windows Vista နှင့် Windows Server ကို 2008 ခုနှစ် (ဒေါင်းလုပ်) ။
3) DirectX ကို 11 - DirectX ကို 9.0c နှင့် DirectX ကို 10.1 ပါဝင်သည်။ x32 နဲ့ x64 စနစ်များနှင့်အတူ Windows ကို7/ Vista က SP2 နှင့် Windows Server 2008 ကို SP2 / R2: ဒီဗားရှင်း operating system မြား၏တစ်ဦးမဟုတ်ဘဲကြီးမားသောအရေအတွက်ကထောက်ခံပါတယ်။ (ဒေါင်းလုပ်) ။
အကောင်းဆုံး မိုက်ခရိုဆော့ဖ်က်ဘ်ဆိုက်ကနေကို web installer ကို download လုပ်ပါ - //www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=35 ။ ဒါဟာအလိုအလြောကျ Windows ကိုစစျဆေးနှင့်တပ်မက်လိုချင်သောအဗားရှင်း DirectX ကိုအပ်ဒိတ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး, သူ DirectX ကို updates တွေကိုဖယ်ရှားတစ်ခုခုသို့မဟုတ်ရသောအခါ DirectX ကို၏ပိုသစ်သောဗားရှင်းခဲ့ကြုံတွေ့တစ်ခါမျှသည်အထက်ဒီဇိုင်းဂိမ်းတစ်ခုအလုပ်လုပ်ရန်ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ အားလုံးအလိုအလျှောက် update လုပ်အများအားဖြင့်, အသုံးပြုသူကိုသာကို web installer ကို (link ကို) run ဖို့လိုအပ်ပါသည်။
Microsoft ကသူ့ဟာသူလုပ်ထုတ်ပြန်ချက်များအရလုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူးစနစ်ကနေ DirectX ကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး, သူကြိုးစားဖယ်ရှားလိုက်ပါ, ဒါပေမယ့်ကွန်ယက် utilities ၏နံပါတ်ရှိပါတယ်ခဲ့ပါဘူး။
DirectX ကို Eradictor
Link ကို: //www.softportal.com/software-1409-directx-eradicator.html
DirectX ကိုပပျောက်ရေး utility ကိုကို Windows ရဲ့ DirectX ကိုအဓိကများ၏ဘေးကင်းလုံခြုံစွန့်ပစ်ခြင်းများအတွက်အသုံးပြုသည်။ အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုအောက်ပါအင်္ဂါရပ်များရှိပြီး:
ဒါဟာ 4.0 ကနေ 9.0c မှ DirectX ကိုဗားရှင်းနဲ့အတူအလုပ်လုပ်ပါတယ်။
စနစ်ကနေသက်ဆိုင်ရာဖိုင်တွေနဲ့ဖိုင်တွဲ၏ complete ဖယ်ရှားရေး။
registry ကို entries တွေကိုပျော်စေ။
DirectX ကို Killer
ဒီပရိုဂရမ်ကိုကွန်ပျူတာထဲကနေ DirectX ကိုရန်ပုံငွေများဖယ်ရှားပစ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ DirectX ကို Killer ဟာ operating system ပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်တယ်:
- Windows ကို 2003;
- Windows XP ကို;
- Windows ကို 2000;
ထောကျပံ့ OS ကို: Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win8.1, x64 bit နဲ့စနစ်များအပါအဝင်။
DirectX ကိုမင်္ဂလာဖြုတ် - DX10 အပါအဝင် operating system မြား, DirectX ကိုမဆိုဗားရှင်း၏ Windows ကိုမိသားစုတစ်ခုပြီးပြည့်စုံခြင်းနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံဖယ်ရှားရေးများအတွက်ကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုလိုအပ်ခဲ့လျှင်သင်အမြဲတစ်ဦးဖျက်ပစ် DirectX ကို restore နိုင်အောင်, ယခင်ပြည်နယ်သို့ပြန်လာတစ်ခု API ကို function ကိုရှိပါတယ်။
DirectX9မှ DirectX 10 နဲ့အစားထိုးဘို့တစ်ဦးကနည်းလမ်း
1) Start menu ကိုသွားပါနှင့် "Run" (ခလုတ်ဝင်း + R ကို) ဖွင့်လှစ်။ ယင်းနောက် box ကို regedit လို့ရိုက်ထည့်ပါ Enter နှိပ်ပါ။
2) ကို Microsoft DirectX ကို ဌာနခွဲ HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE ကိုသွားပါ, ဗားရှင်းကို click နဲ့ 10 8 ပြောင်းပေးပါ။
3) Next ကို, DirectX ကို 9.0c install လုပ်ပါ။
ဒါကအားလုံးပါပဲ။ ငါသည်သင်တို့အနေနဲ့ပျော်စရာဂိမ်းဆန္ဒရှိ ...